Puntland oo dil ku xukuntay 8 nin oo Shabaab ah (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Puntland oo dil ku xukuntay 8 nin oo Shabaab ah (SAWIRRO)
Puntland oo dil ku xukuntay 8 nin oo Shabaab ah (SAWIRRO)
Maxkamadda Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka Sida Gobolada Mudug & Cayn ee Puntland ayaa maanta xukun dil ah ku xukuntay sideed nin, oo lagu helay inay ka tirsan yihiin Ururka Al Shabaab iyo inay dilal qorsheysan ka gaysteen Magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan qaybta Galmudug.
Dhageysiga maxkamadeynta raggan oo maalmihii ugu dambeysay ay ka socotay Magaalada Gaalkacyo, qaybta Puntland ayay maanta ugu dambeen maxkamaddu go’aan ka gaartay eedeymihii loo haystay raggaasi.
Go’aanka Garsoorka Maxkamadda ayaa waxaa goobta ka akhriyay Dhamme Cabdiweli Maxamuud Maxamed oo ka mid ah Garsoorka Maxkamadda, isagoona ku dhawaaqay in maxkamaddu ay xukun dil toogasho ah ku xukuntay eedeysaneyaashaasi, ka dib markii ay ku qanceen caddeymihii uu maxkamadda horkeenay Xafiiska Xeer Ilaalinta ee Maxkamadda Ciidamada.
Sideedda nin ee dilka toogashada lagu xukumay ayaa haysta muddo bil ah, oo rafcaan ay kaga qaadan karaan xukunkaasi.
27-kii bishii hore ee June ayay ahayd markii Puntland ay dil toogasho ku fulisay kow iyo labaatan nin, oo Maxkamadda Sare ee Ciidamada Qalabka Sida Puntland ku heshay in ay dilal iyo qaraxyaba ka gaysteen deegaanada Puntland.
Previous articleBankiga Dhexe Somaliya oo hirgelinaya hab maaliyadeed mideysan
Next articleRooble oo la kulmay Siyaasiyiinta Gobolka Gedo ku metela Jubbaland (SAWIRRO)